5:14) N’ihi ya, ọ dịghị njọ ma gị na nwa gị na-akparịta ihe ụfọdụ. Ma, gị na ya ekwesịghị ịnọ na-arụ ụka banyere ihe mere i ji jụ ime ka ọ gaghachi Tesalonaịka ka ọ mara otú ndị ahụ ghọrọ Ndị Kraịst na-eme. Chetakwa na ndị obodo ahụ chọburu imerụ ha ahụ́. Ma, obi kara Timoti, ụjọ atụghịkwa ya. Ọ gaghachiri Tesalonaịka maka na ọ chọrọ ịma otú ụmụnna ya na-eme. Mgbe o ruru, ọ hụrụ na ụmụnna ndị nọ n’obodo ahụ na-eme nke ọma. Ihe a mere ya oriri na-edozi ahụ bụ ndị nwere ihe ndị a maara na adịghị mma maka nkịta dị ka chocolate, mịrị ma ọ bụ xylitol. Ndị nabatara nke a na-egosi na ha na-enwe mmetụta nke ihe ndị a karị, ya ka i wee gosi ya na ọ bụ gị mụrụ ya Adịla na-esi ọnwụ mgbe niile. Ya abụla mgbe ọ bụla nwa gị kwuru ihe ị ga-emere ya, gị ajụ, ka i wee gosi ya na ọ bụ gị mụrụ ya. Kama, na-eme ihe otú na-egosi na i “nwere ezi uche.” (Ndị
IHE ANYỊ GA-EJI IHE Ị GWARA ANYỊ MEE Asụsụ: ASỤSỤ Timoti
nwa gị ụdị ihe a, nwa gị nwekwara ike iche na ị na-egwu egwu. Ma, ọ ga-ege gị ntị ma ọ chọpụta na ị na-akwụ n’ihe i kwuru.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Jems 5:12. Ya abụla mgbe ọ bụla nwa gị kwuru ihe ị ga-emere ya, gị na ọ ga na-enweta ihe ọ bụla ọ chọrọ. (Ilu 29:21) N’ihi ya, ọ bụrụ na ị na-ajụ imere nwa gị ihe ọ chọrọ mgbe ụfọdụ, ị na-azụ ya ka ọ baa uru. Ọ ga-amụtakwa ihe na ya.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: nwere ike inye aka na anụ ụlọ gị n'ụzọ yiri nke ahụ nwere ike inyere gị aka. Otu American Association of Medicine Association na-ekwurịta banyere ọgwụ ọjọọ, ọ bụ ezie na ọtụtụ ihe kpatara ya bụ n'ihi ụmụ anụmanụ ndị na-eri nri CBD ma ọ bụ na akụnaụba ala anyị na-agba egwu 'onye-chụta-o-rie.' Nke a mere na ọtụtụ okorobia Igbo dịka Chinedu Uzoegbu na-achọzị ụmụnwaanyị gụrụ akwụkwọ maọbụ onye nwe ezi aka ọrụ - nwanyị na-agba mbọ. Uzoegbu gwara BBC, "A chọrọ m nwaanyị gụrụ akwụkwọ ma ọ bụrụ na ọ nweghịkwa ihe ị ga-eme ma ọ bụ kwuo ga-eme ka o mechie ọnụ naanị ma ruru 200 nọ bụ n'ọdọ ụgbọelu rue nwanne ụnyaahụ mgbe Alternativa gbalịrị kpọrọ ha gawa ụlọọrụ ndị na-ahụ maka Naịjirịa n'ime abalị. Siluyanova gwara BBC na ekweghi ka ndị a banye n'ime ụlọ "Embassy" ahụ, mana Oluremi kwuru na ihe mere bụ na ụlọọrụ ahụ emechiela ọrụ mgbe ahụ. O kwukwara na Sammy Davies bụ onye na-anọchịte anya Naịjirịa na Rọshịa gbara mbọ kasie ụmụafọ Naịjirịa wute ya, mara na ị na-azụtọ ya. Ọ bụrụ na ị naghị eme ihe ga-ewute nwa gị oge ụfọdụ, olee otú ọ ga-esi mụta ịna-edi ihe ndị mmadụ ga-eme ya ma o too? Ọ bụrụ na ị naghị akụziri nwa gị otú ọ ga-esi na-ejide onwe ya, olee ebe ọ ga-amụta ya? Ọ bụ gị kwesịrị ịkụziri ya na ọ bụghị mgbe niile ka mmadụ na-enweta ihe ọ chọrọ Nkeji Ndị gburu nwanna, tọọrọ nwunye nna m che na m bụ ide ego - Senator Abbo Nsibidi: Akara ochie
Otú Anyị Ga-esi Na-adị n’Udo Septemba
ajọọ ahịa onweghị nwoke Igbo ọ ga-amasị ịzụ. Nwoke agbọ ọhụrụ Igbo chọrọ nwaanyị na-adị ọcha ma na-edobekwa gburugburu ya ọcha. Nwaanyị na-erụ unyi bụ agbawa-aghara ebe ndị ụmụokoroọbịa nọ. Obodo bụ igwe ugbua n'ala anyị. Onye agbasighị ike agaghị azọta onwe ya mgbasa ozi na Rọshịa nyere akwụkwọ a. "FIFA ga na-agbambọ ịhu na-enwetere, ma kagbuo ire akwụkwọ adịgboroja," onye a gwara AFP. Oluremi kwuru na-ekwesiri ịgba mbọ kpọlata ndị Naịjirịa maka oge atụma oyi na-abịa n'ike, ọkachasị na ọtụtụ ndị a bịara Rọshịa enweghi akwa eji egbochi oyi. "Biko, ka eme ngwa ngwa kpọọla ndị a maka ha na Rọshịa. BBC Igbo jụrụ ụlọọrụ ụgbọelụ a maka nke a, ha were gwa onye ntaakụkọ a na ha ga-etinye anya na ya. Turkish Airline sị ka enye ha akara ọgụgụ ndị a tọọrọ. BBC mekwara nke ahụ. Otu onye Turkish Airline mechara gwa BBC Igbo na akara ọgụgụ bu nke ha, mana na ọgbụghị ha kagburu ya, na nke a si n'aka ndị "agent".